metiresi yakanakisa - Rayson
Iwe uri munzvimbo chaiyo ye metiresi yakanakisa.Parizvino iwe unotoziva izvozvo, chero chauri kutsvaga, une chokwadi chekuchiwana icho Rayson.isu tinovimbisa kuti iri pano Rayson.
Chigadzirwa chine tembiricha yakanaka inokwanisa kugona. Ma mechanical michina ayo haazokanganisike nekusiyana kwekushisa..
Tinovavarira kupa chemhando yepamusoro metiresi yakanakisa.yevatengi vedu venguva refu uye isu ticha shingairira kushandira pamwe nevatengi vedu kuti tipe inoshanda mhinduro uye mutengo mabhenefiti.
Professional Coil Spring Mattress vagadziri
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Main zvigadzirwa Professional Coil Spring Mattress vagadziri. Coil Spring Mattress Rayson Spring Mattress Mugadziri ari kuedza kuvandudza mitsva ye. Coil Spring Mattress Iko kunaka kudzora kweRayson kunyatso kudzorwa. Iyo inovhara zvinyorwa zvealuminium, uremu hwepuru, muyero weyakagadzika, danho rekuchengetedza moto uye zvichingodaro.
Nyowani Yakatenderera Euro Pamusoro futon mattress ine zvitubu
New Rolled Euro Yepamusoro futon mattress ane matsime + Kana iwe uri kutsvaga chitsva chakapetwa muhomwe chitubu chetiresi chinopa nyaradzo, rutsigiro uye chinobatsira iwe kuwana hope dzakanaka husiku, iwe uri munzvimbo chaiyo. Pano iwe unogona kuwana rakawanda matomatiki pamakwikwi emitengo, uye ese ayo anodzoserwa aine mutengo mechivimbiso., Https: //www.raysonglobal.com.cn
China Spring Hybrid Matress vanogadzira -Rayson
3 Zone Foam uye Spring Hybrid Matress Iyi mattress inoratidzira pilo yepamusoro dhizaini, ichiita kuti iite sezvakanaka. Kubudirira kwe Foam kubva mumateti kunokutadzisa kuti unzwe kuti zvitubu, uye zvakare izvi zvinoita kuti vanhu vave nerunyararo rwekurara. Iyo yepakati mwoyo yakagadziriswa uchishandisa yakakwirira-density memory foam, yakanyarara uye inotonhorera. Memory Foam pamusoro pekushisa kwemuviri kunzwa, zvishoma nezvishoma kuva nyoro, ichidya kudya kwemuviri wemunhu kumanikidza kururamisa muviri kusvika pachinhu chakanyanya kunaka chinzvimbo. Inogona kugutsa zvinodiwa nevarume nevakadzi vakasiyana.
Yakanakisa Mutengo wepamusoro 10 Rinotengesa Upfumi Mubhedha Chemati
Yakanakisa Mutengo Pamusoro Pegumi Kupisa Yekutengesa Spring Mubhedha Mattress + Yakanyanya Mutengo Pamusoro pePamusoro Yekutengesa Kwepasiripo Mabhedha Chemati, Chinhu chitsva uye chakatengeswa zvinopisa kubvira 2018.Both compressing and rolling packing are available.Pocket spring.Best mutengo ,. https: //www.raysonglobal .com.cn
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Main zvigadzirwa Professional kusimudzira mutengo wakanaka akaputirwa machira mukati mebhokisi mugadziri ebhokisi. kusimudzira yakanaka mutengo yakarongedzwa machira mubhokisi mubhokisi Iko kunaka kwekudzora kweRayson kunoitwa zvakanyanya muchiitiko chega chega chekugadzira, kunyanya kusarudzwa kwezvinhu zve elastomer. Yakazara maratidziro emhando dzekuedza bvunzo dzeRayson dzaitwa. Ivo vari anti-bhakitiriya kuyedza, abrasion kuramba bvunzo, kunyorova-kukwenya, kuomarara, uye kusimba simba. kusimudzira yakanaka mutengo yakarukwa machira mubhokisi mubhokisi Chigadzirwa chinoratidza simba rakakura. Yakagadzirwa neyakaomesesa midziyo uye zvikamu, inogona kumira kune yakasimba nguva yemamiriro ekunze, kuvhunduka, kudedera, uye abrasion.
Yakanakisa Yepamusoro Pamhepo Yakakwira Plush King size Mattress Supporter
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Zvigadzirwa zvikuru Best Euro yepamusoro Hombodo Yepasi Yepasi Mekutengesa Matress. Euro Pamusoro Anoshamisira Plush King size Mattress Rayson Spring Mattress Mugadziri ane wandeji yehunyanzvi uye yakakwana zvigadzirwa mitsara. Rayson Spring Mattress Mugadziri ane nzvimbo inochengeterwa zvinhu zvakanaka kuti ave nechokwadi chekuti kuwanikwa kwakakwana. Euro Pamusoro Anodhura Plush King size Mattress Kushandisa ichi chigadzirwa kunobvisa kukosha kwekubhadhara akavimbika pombi yekugadziridza nyanzvi kuti iite yakawanda yebasa rekuchengetedza.